सिमेण्ट उद्योगको हालत | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार सिमेण्ट उद्योगको हालत
सिमेण्ट उद्योगको हालत
अभियान दैनिकको माघ अङ्कमा ‘हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग : खानीको समस्याले उत्पादन ठप्प’ शीर्षकको समाचार पढ्न पाएँ । समाचार पढ्दा लाग्यो नेपालमा कुनै पनि उद्योग स्थापनासँगै त्यसको अवसानको कारण जनता नै हुने गरेका छन् ।
समाचारअनुसार स्थानीयको विवादले खानी सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारी स्वामित्वको सिमेण्ट उद्योग बन्द भएको छ । यस्तै नियति चोभारको हिमाल सिमेण्टले भोगिसकेको हो र अब अरू सिमेण्ट उद्योगले पनि यस्तै परिणाम भोगे भने आश्चर्य मन्नु नपर्ला । कुनै पनि उद्योग स्थापना हुँदा स्थानीय जनताको समर्थन र विरोध रहने गर्छ । कतिपय जनता रोजगारीको आसले उद्योग स्थापनामा सहयोगी बन्ने गर्छन् । तर, तिनीहरूका विरुद्ध लाग्नेहरू पनि हुन्छन् ।
सिमेण्ट उद्योग हुन् वा इँटा उद्योग, स्थापनाको समयमा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन लिने गरिन्छ । जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुनु हुँदैन । त्यसकारण पनि यस्ता उद्योग बस्तीभन्दा धेरै टाढा स्थापना गर्ने गरिन्छ । तर, उद्योग स्थापनासँगै त्यहाँ मानव आवतजावत बढ्दै जान्छ र त्यही नजिकमा बस्ती पनि विस्तार हुँदै जान्छ । कालान्तरमा तिनै बस्तीका जनता उद्योगको विरुद्धमा उत्रिन्छन् र उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ । यस्तो हुनुमा उद्योगको मात्र दोष छैन । स्थानीय बस्ती विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्ने जनता र अनुमति दिने सरकारी निकाय पनि दोषी हुन् । बस्ती भएकै ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्नु उद्योगीले गरेको अपराध मान्न सकिन्छ । तर, उद्योग भएको ठाउँमा आफैलाई असर पर्ने गरी बस्ती विकास गर्नेलाई अपराधी मान्ने कि नमान्ने ?
अहिले नेपाल सिमेण्ट उत्पादनमा करीब आत्मनिर्भर हुँदै छ । यो खुशीको कुरा हो । तर, हेटौंडा सिमेण्टमा जस्तै अवरोध अन्य सिमेण्ट उद्योगमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसो भयो भने त्यो आत्मनिर्भरता पक्कै पनि इतिहास बन्छ । त्यसैले उद्योगीले मात्र होइन, नीतिनिर्माता अनि उद्योग सञ्चालन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले पनि जनताको अवरोधलाई हटाउन चासो दिने पो हो कि ?
Hetauda cement factory Banda kunai haalat ma hunuhunna. Tara environment comply hunu jaruri xa. Factory kaan Banda gari basda janta sadakma aaunu pareko pani thiyo.